Mon Petit Avatar: What is new in Siam Ocean World?
Posted by Mon Petit Avatar at 6:08 PM
လှလိုက်တာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကျွမ်းတာလည်း ပါမှာပေါ့လေ
ဒါနဲ့ တို့တွေကို သတိရနေတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာမိတယ် :)
How is your rush now, sis? Hope you feel fine. I understand you that when you can't visit the blogs you miss their posts,right? Same for me. I feel also like I need something in my days and something is incomplete when I can't read the blogs. We are blog addictive :)) Thanks for sharing seashells photo. Love to see them!
စားချင်လာလိုက် သွားချင်လာလိုက် နဲ့ စာတွေလိုက်ဖတ်ရင်း။
မတွေ့တာ ကြာနေလို့ အလုပ်များနေလား-လို့၊ တခါတခါ လာကြည့်ပေမယ့် စီဘောက်စ် မတွေ့တာနဲ့ မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဘူး၊ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရင်း She sells seashells on the sea shore ဆိုတာလေး သတိရသွားတယ်...။း)
Baby ရေ အမြဲသတိရနေတတ်တာအမှန်။
Rose ရေ ဆေးတော့မသောက်ရတော့ဘူး မေးတာကျေးဇူးပါ Blog Addiction ကတော့ကုလို့မရသေးဘူး။
Iora တို့Baby တို့ဆီကပြန်ရင်အမြဲဗိုက်ဆာစေတာလူမသိဘူးနော်။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ She sells seashells ကို ကလေးတုန်းကသာ ပီအောင်ဆိုရမယ် ဆိုရင်မပီတာနဲ့ ရိုက်ခံရဖို့သိပ်သေချာနေတာပဲ။
ခရုလေးတွေဆိုကြိုက်လို့ သဲဖြူကျွန်းသွားတုန်းကကောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခရုရောင်စုံတွေသိမ်းထားသေးတယ် ကြုံရင် တင်ဦးမယ်...။
တင်ပါ မိုးငွေ့ ဒီမှာကြည့်မည့် အမာခံပရိတ်သတ်ကြီးတစ်ဦး ရှိပါတယ်။